दुःखद खबर; नेकपाका युवा नेता बुद्ध लामाको नि’धन – AB Sansar
दुःखद खबर; नेकपाका युवा नेता बुद्ध लामाको नि’धन
September 24, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on दुःखद खबर; नेकपाका युवा नेता बुद्ध लामाको नि’धन
रामेछाप ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रामेछापका युवा नेता बुद्ध लामाको नि’धन भएको छ । तत्कालिन युवा सं’घ रामेछापका अध्यक्ष समेत रहनुभएका युवा नेता लामाको हृ’दयघातको कारण नि’धन भएको हो । मन्थली नगरपालिका–१४ निवासी लामा लामो समयदेखि नेकपाको रा’जनीतिमा क्रि’याशिल रहदै आउनुभएको थियो ।
हरिसिद्धि मावि फु’लासीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका लामालाई थप उपचारको लागि मन्थली ल्याउने क्रममा बाटोमै नि’धन भएको नेकपा रामेछापका नेता प्रकाश कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो । मन्थली नगर कमिटीका सदस्य समेत रहनुभएका लामालाई उपचारको लागि लैजाने क्रममा कि’र्नेस्थित स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टरले मृ’त घो’षणा गर्नुभएको थियो
। उहाँ लामाको पा’र्थिक श’रीरलाई मन्थली नगरपालिका–१४मा रहेको घ्या’ङमा राखिएको छ ।नेकपा रामेछापका सचिव शान्ति पौडेलले लामाको नि’धनले पार्टीलाई अ’पुरणिय क्ष’ति पुगेको बताउनुभयो । उहाँले दु’खद घडी’मा मृ’त आ’त्माप्रति श्र’द्धान्जली व्यक्त गर्दै प’रिवारजनमा सं’मवेदना व्यक्त गर्नुभयो ।
२५ लाखको चि’ट्ठा परेको छ भन्दै ‘imo’ बाट ठगि गर्ने २ जना प’क्राउ
घरको छत ख’स्दा, वंशनै नरहने गरी परिवारै स’खाप !
February 15, 2021 February 15, 2021 Ab-संसार
यी ६ चिज खान नजान्दा हुनसक्छ क्यान्सरको समस्या !!
दुर्गमको सहारा हवाइ उद्धार : अछामका ११ गर्भवतीको निःशुल्क हवाइ उद्धार !!
महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनको निधन September 25, 2021